Balaa ibiddaa: Duukamiif Bishooftuu gidduutti kan argamu warshaan Eastern industrial Zoone jedhamu gubataa jira. Kichuu
HomeAfaan OromooVideosBalaa ibiddaa: Duukamiif Bishooftuu gidduutti kan argamu warshaan Eastern industrial Zoone jedhamu gubataa jira.
Balaa ibiddaa: Duukamiif Bishooftuu gidduutti kan argamu warshaan Eastern industrial Zoone jedhamu gubataa jira.
#Bishooftuu #Balaa ibiddaa: Duukamiif Bishooftuu gidduutti kan argamu warshaan Eastern industrial Zoone jedhamu gubataa jira.Duukam:
Magaala Bishooftu fi Duukam gidduu “east afrika” cinaatti kan argamu Warshaan “Jirbii” foohu gubaachaa jira.
Sa’aati 12:00 irraa eegalee…
Sababni ka’uumsa hin baramne jirbiin guutummaatti barbaada’uun mirkanaa’eera. Ittisni balaa ibiddaa amma qaqabaa akka jiran beekame
Duukamiif Bishooftuu gidduutti kan argamu warshaan Eastern industrial Zoone jedhamu gubataa jira. Shaneetu harka keessaa qaba jechuun isaanii waan hin oolledha
#OPDO_KEESAATIS_ATM fii OBN akka hin arginee
Utuu abiddi hin dhaamin akkamitti gazexesitoonni OBN ga’uu danda’an?
Manni gubachaa jiru kun kan abidda itti qabsiise isinumaani.
“Keenya nama tokko rasaasin miila xiqqoo moccorte malee lola guyyaa sadii walirraa hin cinne keessaa akkuma budaa baaqelaatti nagumaan yaa’aa jirra.”
NUTI BOSONA jirra, yoo fedhan XAYYAARAAF TAANKIINIS dhufanii nuun loluu danda’u. Garuu immoo uummata nagaa magaalaa irraa DHUKAASA wal irraa hin citne, uummatatti banan uummatniis manaaf qabeenya ofii gatee lubbuu ofii baraaruuf bosonatti dheessee , uumata achitti hafe irratti QAWWEE itti riibsite,
ደማቅ አቀባበል ቀዳማዊት እመቤት ወይዘሮ ዝናሽ ታያቸው ትግራይ ክልል ሽሬ ገብተዋል
Hiber Radio Daily Ethiopian News January 14, 2019
አዲስ ቴቪ ጥር 6/2011 ዓ.ም
ኢትዮጵያን በተለያዩ ሃገራት የሚወክሉ አምባሳደሮችና ዲፕሎማቶች የሃገራቸው ጥቅም ከምንም በላይ የሚያስቀድሙ ሊሆኑ እንደሚገባ ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህምድ ገለጹ፡፡ አለም አቀፍ አዝማሚያዎችን የሚረዱና በአገራቱ የሚኖሩ ኢትዮጵያውያን መብት የማስጠበቅ ሚና እንዳላቸው ጠቅላይ ሚኒስትሩ ተናግረዋል፡፡ ዘገባው የዳዊት ብርሃኑ ነው ሚካኤል ህሩይ ያቀርብዋል፡፡
Ka i oromoo
Dr abiyyi mootummaa gaariidhaa
warri gufuu itti tahaa jirtan nurraa dhaabbadhaa
Waamicha Hiriira Araaraa Tokkummaa Barattoota Amboon Qophaa’e !
Ummata keenya Oromoo dararama ulfaataa keessummeessaa jiruuf waan dandeenyuun haa birmatnuuf! Ibsa Qeerroo Bilisummaa Oromoo